Maite Nicuesa | 14/11/2021 23:43 | Tababar
Waa maxay qareen? Qaybta sharciga waa mid ka mid ah kuwa bixiya fursado shaqo oo badan maanta. Dhaqangelinta sharciga ayaa muhiim u ah meel kasta kaas oo uu jiro xeer nidaaminaya meel gaar ah. Qofka bini'aadamka ah, oo ay soo food saartay xaalad gaar ah, wuxuu leeyahay xuquuq iyo waajibaad. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhacdo in qofku go'aansado inuu raadsado caawinaad xirfadle si ay u ilaaliyaan danahooda gaarka ah.
Qareenku waa khabiir la socda oo la taliya macmiil kasta. Waa khabiir kiis daraaseeya oo difaaca si loo gaadho ujeedo gaar ah. Xirfadda sharciga waxaa sidoo kale laga heli karaa filimaan si qoto dheer u falanqeynaya shaqada loo baahan yahay. Waxa jira majaajilo, marka laga eego dhinaca kaftanka, si qoto dheer u gala adduunka sharciga.
Filimka Timo cad oo sharci ah, oo uu jilay Reese Witherspoon, ayaa tusaale u ah. Elle Woods waxay bilawday wadadii ay u mari lahayd Dugsiga Sharciga ee Jaamacadda halkaas oo ay isku diyaarinayso inay qareen noqoto. Jilaaga Richard Gere ayaa filimka ku jilaya qareenka hamiga leh ee Martin Vail Labada weji ee runta.
inta u dhaxaysa Sharciyaqaan Macmiilkuna wuxuu dejiyaa dammaanadda kalsoonida. Qareenku waxa uu noqdaa meel lagu taageero kuwa ku milmay hab-socodka si ay u gaadhaan ujeeddada la rabo. Hadafka ku habboon waxaad filayso, xuquuqdaada, iyo danahaaga. Sidan oo kale, khabiirku kaliya kuma bixiyo talo sharci, laakiin sidoo kale wuxuu bixiyaa taageero shucuureed. Qareenku waa xirfadle ku soo caan baxay xirfadihiisa ku hadalka fagaare, isgaarsiin adag, dhegeysi firfircoon iyo naxariis. Xirfadlaha waa inuu sidoo kale ku aflaxaa imtixaanka gelitaanka xirfadda sharciga. Iyo, dhanka kale, waa kulliyad.
1 Waa maxay qareenka shirkadda
2 Waa maxay qareenka qoyska
3 Waa maxay qareenka dhijitaalka ah
Waa maxay qareenka shirkadda
Waxaa jira noocyo kala duwan oo qareeno ah. Qareenka shirkadu wuxuu noqdaa tixraac tixraac ganacsiyada doonaya inay ku daraan khabiirada sharciga kooxdooda. Ku dhaqanka saxda ah ee sharciga ayaa lagama maarmaan u ah horumarinta ururka. Haddaba, Khabiir ku takhasusay sharciga ayaa ku wargeliya ganacsatada iyo ganacsatada waqtigooda wararka suurtagalka ah.
Waa maxay qareenka qoyska
Mararka qaarkood, qareenku wuxuu difaacaa danaha macmiilka ee deegaanka qoyska. Tani waxay dhacdaa marka ujeeddada isku dhacu ay tahay mid guud ahaan laga eegayo goobtaas gaarka ah. Waxa jira go'aamo tilmaamaya isbeddel ku yimi mashruuca nolosha qoyska. Tusaale ahaan, kala tag ama furriin waa matalaadda cutubka muhiimka ah ee sheekada jacaylka. Si kastaba ha ahaatee, sagootin wanaagsan ayaa fure u ah ilaalinta xiriirka ixtiraamka leh ka dib macsalaameynta.
Dhammaadka guurka, dhanka kale, waxa kale oo weheliya go'aan qaadashada ku saabsan arrimaha khuseeya labadaba. Haddaba, Qareenka qoyska wuxuu fududeeyaa kulanka si loo gaaro yoolal guud.
Waa maxay qareenka dhijitaalka ah
Sida aad arki karto, bulshadu waxay ku horumartaa tignoolajiyada cusub. Sidaa darteed, isbeddelku wuxuu sidoo kale keenaa dhalashada xirfado cusub. Baahida xirfadda gaarka ah ee suuqa shaqada ayaa sii kordheysa, qareenka sharciga dhijitaalka ah ayaa tusaale u ah tan. Internetku waxa uu noqday meel tixraac ah oo meelo kala duwan ah. Tusaale ahaan, shirkaduhu waxay dejiyaan xeelado ay ku dhejiyaan sumaddooda internetka. Dadka si firfircoon u raadsada shaqo sidoo kale waxay isticmaalaan aaladaha dhijitaalka ah si ay u gaaraan hadafkooda.
Macnaha guud ee dhijitaalka ah waxa kale oo nidaamiya xeerar qiimeeya ixtiraamka xuquuqda dadka. IYO Qareenka dhijitaalka ah waa khabiir ku takhasusay arrimahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Waa maxay qareen?
Shaqooyinkee loo arkaa inay lama huraan yihiin?
Waa maxay daaweynta indhaha?